Wasaaradda Boostada oo ku ammaantay Shirkadda Hormuud ku-guuleysiga shahaada caalamiga ah – Somali Top News
Koox hubeysan oo lagu dilay suuqa Bakaaraha
Gudoomiyaha gobalka Banaadir oo amray in la xiro Hoteelada Muqdisho
Wasaaradda Boostada oo ku ammaantay Shirkadda Hormuud ku-guuleysiga shahaada caalamiga ah
March 26, 2020 March 26, 2020 Somali Top News	0 Comments
(Muqdisho, Maarso 25, 2020) Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada ayaa ku ammaantay maamulka iyo shaqaalaha Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud inay ku guuleysatay shahaadada maamul-wanaagga ee loo yaqaano ISO 9001-2015.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan, oo soo dhoweeyay guusha Hormuud, ayaa sheegay in arrintan ay astaan u tahay in shirkadaha dalkeenu adeegyada ay bixiyaan ay waafaqsan yihiin halbeegyada caalamiga ah, arrintaas oo si gaar ah u taabaneysa maadaama Wasaaraddu ay dhiirri-gelineyso in shirkadaha isgaarsiinta dalka ay sii horumaraan, isla markaana tayeeyaan adeegyadooda.
“Farxad gaar ah ayay noo tahay in shirkad isgaarsiineed oo waddani ah ay qaadato shahaado noocan oo kale ah. Waa aqoonsi la siiyay dadaalka ay shirkaddu sameysay, innaguna waan ku bogaadineynaa. Waxaan rajeyneynaa in horumarka noocan oo kale ah la isaga dayan doono.”
Shircigii isgaarsiinta ee la saxiixay 2017-dii wuxuu shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed fursad u siinayaa sidii ay u nidaamin lahaayeen hawlahooda, iyadoo dhowaan Hay’adda Isgaarsiinta Qaranku ay billowday bixinta rukhsadihii (license) ugu horreeyay ee uu dalku yeesho oo ku saleysan sharciga, iyadoo rukhsadahaas ay noqon doonaan kuwo laga aqoonsan yahay dalka gudahiisa iyo dibeddiisa.
← Taliska Xoogga dalka oo sheegay iney xubno shabaab ah ku dileen Deynuunay
Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen oo ku xanuusanaya London →
Ra’isul Wasaare Kheyre oo maanta u dhoofay dalka Qatar
Senator Muuse Suudi oo dowladda ku dhaliilay canshuur qaadista aan waxba loogu qaban shacabka
December 4, 2019 Somali Top News 0
Raggii Weeraray Hotel Naasa Hablood Labo Oo La Maxkamadeynayo